Product Chikumbiro munda
Kapeti uye Mats
Thermal waakaita Wadding- Batting
Metiresi & Quilting
Non-dzakarukwa Finished Product
With pamusoro unhu zvigadzirwa, zvikuru pashure-okutengesa basa uye garandi gwara, isu takunda kuvimba zhinji mhiri kwemakungwa naye, zvakanaka zvakawanda feedbacks aona kukura kwedu fekitari yacho.
Tinogara abate chekambani nheyo "vakatendeseka, nyanzvi, inobudirira uye utsanzi", uye mishoni ose; regai vatyairi zvose vanonakidzwa kutyaira zvavo usiku, regai vashandi vedu vanogona kuona kukosha kwavo upenyu, uye kuti vave nesimba uye basa vanhu vakawanda. Takatsunga ave integrator kuti musika yedu chigadzirwa uye mumwe-vanorega basa Mupi musika yedu chigadzirwa.
Tinogara chandagwinyira basa tenet kuti "Quality iri Chokutanga, Technology ndiye Hwaro, Kutendeseka uye Innovation" .We vanokwanisa kuva zvigadzirwa zvitsva kuramba kuti LEVEL kugutsa zvinodiwa akasiyana vatengi.
Tine zvachose uye kwakakwana yepamusoro kudzora hurongwa, iyo zvinoita kuti mumwe chigadzirwa anogona kusangana unhu zvinodiwa vatengi. Kunze, zvose zvezvinhu edu zvachose yokuongororwa pamberi zvacho.
Unyanzvi Our & Expertise
Tinoisa "kuva creditable vaiita kuti vabudirire kuramba kukura uye utsanzi" sezvo Mashoko edu. Tinoda kugovana yedu ruzivo neshamwari kumba uye kunze, senzira kusika mikuru keke edu pamwe kuita. Tine zvakawanda zvakatambudzwa R & D vanhu uye tinobvuma OEM varayirwa.